Fihaonamben’ny Firaisamonimpirenena : handray andraikitra fa mijaly ny vahoaka !	Araka ny fanambarana tonga eto aminay dia namoaka fehin-kevitra lehibe ny fivorian’ireo
Miantso ny Tafika handray andraikitra ihany koa ny Pr Zafy Albert Miantso ny FFKM handray andraikitra ny ankolafy telo ! Miara mandrodana ny FAT ny vahoaka Auteur Solo Razafy*Publié le 22 mai 201122 mai 2011Catégories Politique	2 pensées sur “Fihaonamben’ny Firaisamonimpirenena : handray andraikitra fa mijaly ny vahoaka !”	bako dit :	23 mai 2011 à 7 h 58 min	IO tsisy afa tsy ny fidinana andalambe no manala an’ireo fatindoza ireo ny sisa blablabla ,ary ny MALAGASY no miara-MIRAY HINA MANALA IREO TSY ANINONA TSY ANINONA ireo fa tsy ny vahiny lava izao ,mandrinrarira sy mandany andro fotsiny!
Dr CELESTIN Robin dit :	23 mai 2011 à 11 h 06 min	Iza avy moa ireto maha tsianjery ny ratra sy ny fery miatra amin ‘ny Firenena sy ny Malagasy..?
Précédent Article précédent : Hazavao an-tsipirihin’ny Malagasy rehatra ny toe-javatra ankehitrinySuivant Article suivant : Notre confiance en Ravalomanana relève-t-elle du fanatisme ?